Ahoana masonao hamadika ny hevitrao - News Fitsipika
Ahoana masonao hamadika ny hevitrao
Ity lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Ahoana masonao hamadika ny hevitrao” dia nosoratan'i Mo Costandi, fa theguardian.com tamin'ny Talata 2 Jona 2015 09.00 UTC
Araka ny taloha hoe, ny maso dia varavarankely ho ao an-fanahy, manambara fihetseham-po lalina mba raha tsy izany dia te-hanafina. Na dia ankehitriny siansa dia misakana ny fisian'ny ny fanahy, izany no milaza fa misy voam-fahamarinana ao izany teny izany: raha ny fandehany fa tsy ny masony ihany no taratry ny zava-mitranga ao amin'ny atidoha, fa mety koa ny vokany eo Tsaroanay zavatra sy hanao fanapahan-kevitra.
Ny masony dia mihetsiketsika foana, ary raha ny sasany amin'ireo hetsika dia eo ambany fanaraha-maso mahatsiaro tena, maro amin'izy ireo no mitranga subconsciously. Rehefa mamaky, ohatra, isika andiam-tena haingana maso hetsika antsoina hoe saccades izay fixate haingana amin'ny teny iray samy hafa. Rehefa miditra ny efitrano, isika namafa saccades lehibe kokoa rehefa mandinika manodidina. Avy eo misy ny kely, involuntary maso hetsika ataontsika rehefa mandeha, mba hanonerana ny hetsika ny lohany sy Mampitombina tsara ny fomba fijery izao tontolo izao. ary, mazava ho azy, ny maso manodidina ny lokony nandritra ny 'maso haingana hetsika' (REM) dingana ny torimaso.
Inona ankehitriny dia lasa mazava fa ny sasany amin'ireo hetsika ny maso dia mety hita ny heviny dingana.
Research namoaka tamin'ny taon-dasa dia mampiseho fa mpianatra dilation misy ifandraisany amin'ny ambaratongam-tsy fahazoana antoka mandritra ny fanapahan-kevitra: Raha misy olona dia tsy azo antoka ny momba ny fanapahan-keviny, dia mahatsapa mainka arousal, izay mahatonga ny ankizy mba mitatra. Io fiovana eo amin'ny maso koa hita Inona no fanapahan-kevitra-Mpanao izany momba ny hoe: vondrona iray ny mpikaroka, ohatra, nahita fa nijery ny dilation nanao izany azo atao ny maminavina ny olona malina rehefa ampiasaina ny hoe 'tsy' dia hanao ny mamitaka fanapahan-kevitra hoe 'Eny'.
Topy Maso Eran- maso mihitsy aza dia afaka manampy mialoha izay isan'ny olona iray dia manana ao an-tsaina. Tobia Loetscher sy ny mpiara-miasa aminy ao amin'ny Anjerimanontolon'i Zurich nanakarama 12 mpirotsaka an-tsitrapo ary ny maso fanarahan'ny hetsika raha midoladola eny ny lisitry ny 40 isa.
Related: Afaka mahita ny horita sy ny hoditra
Hitan'izy ireo fa ny tari-dalana sy ny haben'ny ny mpandray anjara 'maso hetsika mialoha araka ny marina raha ny isa efa ho lazainareo fa lehibe na kely noho ny teo aloha ny iray - ary ny tena. Mpilatsaka an-tsitrapo tsirairay Nitady tetika hafa indray ny fijeriny ka ho amin'ny ankavanana, taloha kelin'ny hoy ireo: ny lehibe kokoa maro, ary nidina ary ho amin'ny ankavia mialoha ny kely iray. Ny lehibe kokoa ny fiovana avy amin'ny lafiny iray ho any amin'ny hafa, ny lehibe kokoa ny maha samy hafa ny isa.
Izany dia toa manondro fa sao dia manana rohy mankany isika isa saro-takarina ao amin'ny atidoha fanehoana amin'ny hetsika amin'ny habakabaka. Fa ny fandinihana dia tsy milaza amintsika izay tonga aloha: na mieritreritra ilay isa manokana mahatonga ny fiovana eo amin'ny maso toerana, na na ny maso ara-tsaina ny toerana misy fiantraikany asa. Amin'ny 2013, mpikaroka tany Soeda namoaka porofo fa izany no farany izay mety ho any am-piasana: maso hetsika mety raha ny marina manamora ny fitadidiana retrieval.
dia nanakarama 24 mpianatra ka nangataka ny tsirairay mba handinika tsara ny andiam-zavatra miseho ho azy ireo tamin'ny zorony iray ny ordinatera. Ny mpandray anjara dia avy eo nilaza mba hihaino ny andian-fanambarana mikasika ny sasantsasany amin'ireo zavatra efa hitany, toy ny hoe "ilay fiara dia miatrika ho amin'ny ankavia", ary nangataka mba manondro araka izay haingana araka izay azo atao raha toa samy marina na diso. Nisy tamin'ireo mpandray anjara Navela Aoka ny masony Mandehandeha momba malalaka; olon-kafa no nangataka manamboatra ny mandinika ny hazo fijaliana eo anivon'ny ny efijery, na an-jorony ny zavatra izay efa niseho, ohatra.
Hitan'ny mpikaroka fa ireo izay navela hifindra ny masony tsitrapo nandritra ny nanao be Tadidio tsara kokoa noho ireo izay raikitra teo amin'ny hazo fijaliana. Mahaliana, anefa, mpandray anjara izay nilaza manamboatra ny mibanjina eo amin'ny zorony fanakonana izay zavatra efa niseho teo aloha nanao tsara kokoa noho ireo izay nilaza ny manamboatra ny mibanjina amin'ny zorony hafa. Izany dia toa manondro fa ny akaiky kokoa ny mpandray anjara 'maso hetsika nandritra vaovao Encoding dia nifanoratra tamin' izay nitranga nandritra retrieval ny vaovao, ny tsara kokoa izy ireo amin'ny fahatsiarovana ny zavatra. Angamba izany satria maso hetsika manampy antsika mba hahatsiaro ny maka sary ny fifandraisana misy eo amin'ny tontolo iainana zavatra ao amin'ny fotoana ny Encoding.
Maso tsy taratry ny zava-mitranga ao amin'ny atidoha, fa mety koa ny vokany eo Tsaroanay zavatra sy hanao fanapahan-kevitra
Maso ireo hetsika afaka hitranga tsy nahy. "Rehefa ny olona no mijery sary dia efa nahita talohan'ny, ny masony matetika voasarika hanatona vaovao izy ireo efa nahita, na dia tsy mahatsiaro tena izy ireo fahatsiarovana izany,"hoy i Roger Johansson, ny psikology ao amin'ny Oniversiten'i Lund, izay nitondra ny fianarana.
Mijery maso hetsika azo ampiasaina koa ny mandona olona ny fanapahan-kevitra. Fandinihana vao haingana iray nampiseho - angamba amin'y - fa ny maso-ampy dia azo hararaotina amin'ny fiantraikany ny fitondran-tena isika, mandray fanapahan-kevitra.
Mpikaroka nanontany mpandray anjara fitondran-tena fanontaniana saro-takarina toy ny hoe "Afaka mamono olona ve ho marina?"Ary avy eo dia naseho, amin'ny solosaina efijery, valiny hafa ("Azo hamarinina indraindray", na "tsy azo hamarinina"). Amin'ny Tracking ny mpandray anjara 'maso hetsika, ary manala ny roa safidy valiny avy hatrany rehefa avy ny mpandray anjara nandritra ny fe-potoana sasany mijery any amin'ny iray amin'ireo safidy roa, ny mpikaroka nahita fa afaka mandona ny mpandray anjara mba hanome fa safidy manokana ho toy ny valiny.
"Faly izahay fa tsy nanome azy intsony vaovao,"Hoy i neuroscientist Daniel Richardson ny London University College, ambony mpanoratra ny fianarana. "Izahay niandry fotsiny ny fanapahan-kevitra dingana namelabelatra ka nanapaka azy ireo amin'ny tena mety tsara ny teboka. Izahay nanao azy hanova ny sainy fotsiny amin'ny alalan'ny mifehy rehefa nanao ny fanapahan-kevitra. "
Richardson koa fa salespeople mahomby mba manana hahatakatra izany, ary mampiasa azy io mba ho maharesy lahatra kokoa amin'ny mpanjifa. "Tsy Mieritreritra ny mandresy lahatra ny olona ho tsara mpitaria, fa angamba ry zareo ihany koa ny mandinika ny fanapahan-kevitra dingana," hoy izy. "Angamba afaka mamantatra salespeople tsara ny tena fotoana izay misalasala ianao mankany iray safidy, ary avy eo dia manolotra anareo ny fihenam-bidy na hanova ny dity. "
Ny ubiquity ny maso-ampy fampiharana ho an'ny finday avo lenta sy ny lafiny iray hafa-natao fitaovana manangana ny mety hisian'ny fanovana ny fanapahan-kevitry ny olona-manao dingana lavitra. "Raha toa ianao miantsena an-tserasera, mba fitongilanana ny fanapahan-kevitra amin'ny alalan'ny fanomezana maimaim-poana amin'ny fotoana fandefasana ianao manilika ny mibanjina ny vokatra iray manokana. "
Related: Ifarimbonana ny temimaso ny mihetsika mamantatra rafitra | Mo Costandi
Noho izany, maso hetsika dia afaka na maneho sy ny fitarihana ara-tsaina ambony asa toy ny fahatsiarovana sy ny fanapahan-kevitra, ary hamadika ny eritreritsika, finoana, sy ny faniriany. Izany fahalalana Mety hanome antsika fomba hanatsarana ny asa ara-tsaina - nefa koa mamela antsika mora kolaka fanodinkodinana ny olon-kafa.
"Ny masony dia toy ny varavarankely eo amin'ny eritreritra dingana, ary vao tsy mankasitraka ny fomba fanazavana be dia be mety ho famoahana avy ao aminy,"Hoy i Richardson. "Afaka mety hanambara zavatra ny olona iray mba te hanafoanana, toy ny fitongilanana ara-poko tanteraka. "
"Hitako maso-ampy fampiharana nampiasaina ho, milaza, mpanohana ny teknolojia izay mahatakatra ny zavatra ilainao finday asa ary avy eo dia manampy avy,"Hoy izy nanampy, "Fa raha ry zareo sisa rehetra ny fotoana azo ampiasaina ny manara-maso isan-karazany ny zavatra hafa. Izany dia hanome manankarena be vaovao, ary manangana ny mety hisian'ny tsy nahy ny fizarana ireo eritreritra amin'ny hafa. "
Izany dia nanonta dikan- ny endri-javatra Nanoratra ho an'ny BBC.com/Future, tranonkala iray mandrakotra siansa, ny fahasalamana sy ny teknolojia.
Google nividy virtoaly fitarafana Patents avy Foxconn
Motorola Namoaka Ny 'takatry ny' Moto G S ...
23488	0 Article, Toetoetra, Mo Costandi, Neurophilosophy, Neuroscience, Science, Science bilaogy Network
← Microsoft Windows dia hanatitra 10 maimaim-poana in Jolay New fitsapana mampiasa iray ny ra mitete ny hanambara tantara iray manontolo ny niparitaka be aretina →